Matipi mashanu ekurwisa kushaya hope | Bezzia
Toñy Torres | 30/07/2021 14:00 | Matipi ehutano
Kushaya hope ndechimwe chezvinetso zvakajairika yenyika yanhasi, dambudziko rinobata vanhu vazhinji. Iko kusakwanisa kuwana kurara, kugona kurara, kusvika pamuganhu wekuda rubatsiro rwekunze kuti uzviite, idambudziko rinogona kuve nemhedzisiro yakaipa.
Kushaiwa apo neapo, kunokonzerwa nechikonzero chenguva pfupi uye nekukasira, kunogona kuita dambudziko risingaperi. Saka mhando iyi yekusagadzikana haifanire kutarisirwa pasi, nekuti ukakurumidza kugadzirisa, unokurumidza kuwana zvakare kuzorora kurara kunodiwa nemuviri wako. Kana iwe usati uchinetseka nekusingaperi kushaya hope, edza aya matipi ayo achakubatsira iwe.
1 Chii Chinokonzera Kushaya hope?
1.1 Matipi ekurwisa kushaya hope, gadzira tsika yekurara
1.2 Dzidzira kufungisisa
1.3 Gara uchishanda
1.4 Kudya zvine hutano
1.5 Gadzirira nzvimbo yakasununguka yekurara
Chii Chinokonzera Kushaya hope?
Kushaya hope ndiko kutadza kwemunhu kurara kana kuichengetedza mushure mekurara. Kune zvikonzero zvakawanda zvinogona kukonzera kusagadzikana muhope, kunyangwe ichinyanya kuwanda iri parizvino hupenyu, kumhanyisa uye chiuru shanduko dzinodzivirira kujekesa pfungwa panguva yekurara. Zvehupfumi, basa, hukama hukama uye kunetsekana kwevana ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvinowanzoitika zvekushaya hope.
Zvisinei, kune matambudziko ekurapa anogona kubatanidza kushaya hope nezvirwere zvakasiyana siyana. Semuenzaniso, mahormone, metabolic, chirwere chekugaya, kusagadzikana kwepfungwa kana kwepfungwa, pakati pevamwe. Panyaya iyi, chinhu chinonyanya kukosha ndechekuti iwe utsvage rubatsiro kubva kuna chiremba wako, nekuti chinhu chikuru chichava chekurapa dambudziko riri pasi apa. Kune dzimwe nguva kana kazhinji kushaya hope asi uine zvikonzero zvekunze, unogona kuyedza aya matipi ekurwisa kushaya hope.
Matipi ekurwisa kushaya hope, gadzira tsika yekurara
Sezvo nevana pavanenge vari vadiki, ivo inovadzidzisa kurara pane dzimwe nguva dzezuva nemaitiro ekurara. Iyo inoshanda, zviri nyore kuwana uye pamusoro pekukubatsira iwe kurara, zvinokubatsira iwe kuzorora uye kugadzirisa zvimwe zvine hutano zvinhu. Muitiro wekurara unosanganisira yekugeza inodziya usati wadya, a kudya kwemanheru nezvikafu zvinozorodza, bvisa masikirini maawa maviri usati warara uye gadzira mamiriro akakodzera mukamuri.
Kufungisisa kunobatsira iwe kubatana neyako yemukati, kufambisa zvinokunetsa kuti ugone kuzvibata nenzira yakakodzera. Dzimwe nzira dzekuzorora dzinobatsira iwe kurwisa kushaya hope, senge nzira dzekufema kana iyo yoga.
Kurovedza muviri kune hutano munzira dzakawanda, zvinokubatsira kuti urambe uine huremu hwemuviri hwakafanira, zvinokuchengetedza uri muchimiro chakanaka, inobatsira iwe kusunungura kusagadzikana uye zvakare inokutendera iwe kuti urare zvirinani. Mubatanidzwa wezvinhu zvinokonzeresa kushaya hope uye izvo nenzira imwe chete zvinokubatsira kuzvirwisa.
Kana iwe uchinetseka nekushaya hope, iwe unofanirwa kunatsiridza kudya kwako, kunyanya kubva pakati pemasikati. Dzivisa kutora chikafu chinonakidza sekofi, chokoreti, kana infusions neineine. Iwe haufanirewo kudya zvakanyanya mafuta, zvakakangwa, zvakagadziriswa chikafu, kana chikafu chinokusiya uchinzwa kuremerwa. Sarudza zviri nyore chikafu chinodyiwa uye pedza kudya kwemanheru netii chamomil.
Gadzirira nzvimbo yakasununguka yekurara
Iko hakuna chero chakaita seyakaunganidzwa kamuri yekumanzwiro epamoyo kunyatso kugadzirira. Kana uine matambudziko ekurara, kuva nenzvimbo isingakodzeri kuzorora ichave muvengi wako mukuru. Ita shuwa kuti unosiya yako yekurara isina kuzara, isina zvinhu pakati, uye yakachena. Kuva nemachira akachena, nekunhuhwirira kwakanaka uye kutambanudzwa zvakanaka kwakakosha kuti ugone kurara zvakanaka.
Iwe unofanirwa zvakare kuve nechokwadi chekuti une tembiricha yakakwana mumba mako, nekuti kupisa kwakanyanya, hunyoro kana kutonhora zvinokutadzisa kurara. Shandisa mubhedha chete kurara, hauna nharembozha yako kana chero chimwe chinhu chingachinje yako system yetsinga iripedyo. Edza kuzorora kurira senge kurira kwegungwa kana zvakasikwa, kuvanhu vazhinji hazvitadzi.
Kana mushure mekuyedza aya matipi ekurwisa kushaya hope zvichingoramba zvichiripo, chinhu chinonyanya kukurudzira kuenda kuhofisi yechiremba kunotsvaga zvikonzero zvinogona kuitika. Dzivisa kutora zvinodhaka zvinokurudzira kurarakunyangwe iwo anotengeswa pasina mushonga. Kunyangwe ivo vachigona kutorwa, ivo havana kurairwa zvakanyanya kana vasina kunyorerwa uye kudzorwa nachiremba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Matipi ehutano » 5 matipi ekurwisa kushaya hope